मोना कतारको वक्तृत्वकला प्रतियोगितामा मल्ल भए प्रथम ! - Bulbul Samachar
bulbul बुधवार, कार्तिक ३ गते 135 views
कतारमा रहेका म्याग्देलीहरुको साझा सामाजिक संस्था म्याग्दी प्रवासी नेपाली संघ (मोना) कतारले जिल्लामा सञ्चालन गरी रहेको अन्तर माविस्तरीय वक्तृत्वकला प्रतियोगिता बेनीमा रहेको वोस्ट पोइण्ट आवासीय माविले जितेको छ ।
माविका तर्फबाट सहभागी प्रज्वल मल्लले सर्वाधिक अंक ल्याउदै प्रतियोगीताको बिजेता बनेका हुन् । “शैक्षिक स्तर वृद्धिका लागि स्थानीय तहको भूमिका के हुन सक्छ ? शिक्षालाई समयसापेक्ष बनाउन सरकारले गर्नु पर्ने न्यूनतम कार्य के हुन सक्छन् ? साथै परम्परागत शिक्षाको विकल्प के हुन सक्छ ?” शीर्षकमा अन्तिम प्रतिस्पर्धा भएको थियो । मोनाको चौथो महाधिबेशनको अवसरमा मंगलबार बेनीमा प्रतियोगिताको बिजयी धोषणा गरिएको हो ।
बिजयी मल्ललाई संघले नगद २० हजार र प्रमाण पत्रले पुरस्कृत गरेको छ । त्यस्तै द्वितीय स्थान बेनी सामुदायिक स्कुलकी सुमित्रा पौडेलले प्राप्त गरिन् । उनलाई नगद १५ हजार सहित प्रमाण पत्रले सम्मान गरिएको छ । तृतीय स्थानमा वोस्ट पोइण्ट कै शिल्पिका जिसीले हासिल गरिन् । उनले पुरुस्कार स्वरुप नगद १० हजार र प्रमाण पत्र प्राप्त गरेकी छिन् भने सान्तवना पुरुस्कार प्रकाश माविकी सिर्जना कटुवाल र जमुना खर्क माविकी विनिता सुबेदीले प्राप्त गरिन् ।
कटुवाल र सुवेदीलाई जनही ५ हजार सहित प्रमाण पत्रले सम्मान गरिएको थियो । संघले निर्णायक मण्डल र संचारकर्मीहरुलाईसमेत सम्मान गरेको छ । पुरुस्कार तथा सम्मान सॉसद भुपेन्द्र बहादुर थापाको समुपस्थितिमा मोना आईइसिका अध्यक्ष ओम जुग्जालीको प्रमुख आतिथ्यता तथा संघ कतारका अध्यक्ष नरेन्द्र फगामीको सभापतित्वमा सम्पन्न भएको हो । कार्यक्रमलाई महासचिव अजय कुवरले सहजिकरण गरेका थिए ।